Qarax goordhaw ka dhacay Muqdisho (Daawo Sawirada) – Xeernews24
Qarax goordhaw ka dhacay Muqdisho (Daawo Sawirada)
17. April 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Qarax Gaadhi hoosta lagaga soo xidhay walxaa qarxaa ayaa barqonimadii maanta ka dhacay laamiga Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho gaar ahaan afaafka hore ee Hotelka lagu magacaabo Mubaarak.
Sida aan Wararka ku helnay gaadhiga qaraxa lagu xidhay ayaa waxaa iska lahaa oo watay Taliyaha Nabad Suggida Maamulka Galmudug Cabdi Dheere , gaadhiga ayaana qarxay xili laamiga dhinaciisa lagu baarkimay.
Goob jooge ayaa noo sheegay in sargaalka watay gaadhiga qaraxa lagu soo xidhay uu gaadhiga ka degay uuna galay hotelka, waxaana wararka qaar sheegayaan in qaraxa lagu xidhay xili uu yaalay afaafka hore ee Hotelka.
Qaraxan ayaa la sheegay in uusan ka dhalan khasaaro nafeed, waxaana gabi ahaan gubtay gaadhigii qaraxa lagu soo rikibay, waxaa sidoo kale dabku gaadhay waxyeelana uu gaadhsiiyay gaadiid kale oo yaalay halka gaadhigu ku qarxay.
Ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya ayaa si deg deg ah usoo gaadhay goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana gaadiidka ku gubtay qaraxa daqiiqado badan kadib damiyay gaadiidka dabdamiska oo goobta soo gaadhay.
Qaraxyada gaadiidka lagu soo rikibo ayaa kusoo badanaya magaalada Muqdisho, qaraxyadan ayaana u muuqda kuwa ka xoog badan kuwii horey gaadiidka loogu xidhi jiray, waxaana gaadiidkiii ugu dambeeyay ee qaraxyadan lagu xidhay noqdeen kuwo intooda badan gubtay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/qar-1.jpg 424 696 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-17 13:13:462019-04-17 13:13:46Qarax goordhaw ka dhacay Muqdisho (Daawo Sawirada)
Maxaad ka ogtahay Qiimaha uu yahay dahabka Somalia u yaala Maraykanka? Daawo.Halgame Aadan Alaale oo si kulul uga hadlay dulmiga lagu hayo shacabka...